Mahanoro : Nasongadin’ny « Be mirango » ny fomba amam-panao Betsimisaraka
Tontosa ny andiany faha-4. Nasongadin’ny hetsika « Fety Be mirango » notanterahina tany Mahanoro ny 01 ka hatramin’ny 03 septambra teo ireo fomba amam-panao Betsimisaraka. Nandray anjara tamin’ity hetsika ity ireo kaominina 11 mandrafitra ny distrikan’i Mahanoro. …Tohiny
« Feo telo, gitara telo », io indray no hanamarika ny seho takarivan’ny Piment Café etsy Behoririka anio alina. Seho hiarahana amin’ny mpanakanto telo manana ny talentany eo amin’ny fitendrena gitara, sy eo amin’ny sehatry ny hira. …Tohiny
Kianja Mitafo – Mahamasina
Hiarahan’ny hira sy ny hatsikana. Rehefa tsy hita matetika tao anatin’ny tontolon’ny seho, dia hotanterahina anio alina manomboka amin’ny 8 ora etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny « Kakakaka Kaïamba ». Hetsika handrenensana ireo vazo kaïamba araka …Tohiny
Mpandrindra rezionaly HVM : « Efa manana fototra Analamanga », hoy Ndranto Rakotonanahary
Voatendry ho Mpandrindra Rezionalin’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) Analamanga nandritra ny lanonana fanokafana ny fidirana politika, ny lehiben’ny Faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary. Noho izay indrindra, nitondra fanazavana mahakasika ny fandrindrana ankapobeny ny …Tohiny